January 22, 2018 - Pardeshi Khabar
यामराज बिष्ट/जनवरी २२, मलेसिया । चिनियाँ नयाँ बर्ष २०१८ को अबसर पारेर मलेसियाको प्रमुख तीन शहरमा सास्कृतिक कार्यक्रम हुने भएको छ । ‘‘सगुन सास्कृतिक मञ्च जोहर रेस्टुरेन्ट पाहुना घर र दिपज्योति युवा क्लब मलेसियाले आयोजना गर्न लागेको चाइनिज न्यु एयर कन्सर्ट २०१८ नामक” सांगीतिक कार्यक्रममा नेपाल बाट ख्याति प्राप्त करिब आधा दर्जन भन्दा बढी कलाकारहरु मलेसिया अाउने छन् । चिनिया नयाँ बर्षको सार्बजनिक बिदालाई सदुपयोग गरि उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले बताएको छ । फेब्रुअरी १६ मा न्युयोर्क होटेल जाेहर, १७ फेब्रुअरी देवनहल मलक्का ओसियन ,फेब्रुअरी १८ बातुपाहाडमा आयोजना हुनेफुर्सदमा
जनवरी २२,काठमाडौं । सरल भाषशैली प्रयोग गरेर गहन विषयलाई उजागर गर्ने युवा साहित्यकारको रुपमा प्रसिद्धि पाएका मालिका केशरीद्वारा लिखित सुवर्णलताको सोमबार काठमाडौंमा विमोचन भएको छ । संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्त तथा प्राज्ञ गीता केशरीले संयुक्त रूपमा पुस्तक विमोचन गरेका थिए । पुस्तकमा नारीको वर्तमान अवस्था र विगतको तुलना गरिएको छ । बौद्ध दर्शनको बारेमा पुस्तकमा परिचर्चा गरिएको पाइन्छ । पुस्तकको बारेमा बोल्दै सरुभक्तले भने, ‘नेपाली साहित्यमा युवा पुस्ताको प्रवेश आशालाग्दो तवरले भएको छ । आत्मैदेखिको चाहनाले उत्प्रेरित भएर लेखकले साहित्य सिर्जना गरेका छन् ।’ उपन्यास नायिकाफुर्सदमा
श्रम स्वीकृति घोटाला काण्डका ३३ जनालाई अदालतबाट सफाइ
जनवरी २२,काठमाडौं, – वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिँदा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोग लागेका ३३ जनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु प्रमादेकुमार श्रेष्ठ, चण्डीराज ढकाल र द्वारिकामान जोशीको इजलाशले अनियमिततामा संलग्न भएको अभियोग लागेका सबै ३३ जनालाई सफाइ दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रम स्वीकृति दिने क्रममा कामदार र म्यानपावर कम्पनीबाट घुस लिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन निर्देशक रामजीप्रसाद बरालसहित ९ जना कर्मचार तथा २४ जना म्यानपावर सञ्चाकविरु २०७१ असार ११ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामाफुर्सदमा
ओमनबाट सिरीयामा ४ हजार डलरमा बेचिएकी शुकमाया लिम्बुको उद्धार
जनवरी २२,काठमाडौं । रोजगारीको लागि विदेश जाने क्रममा पछिल्लो समय नेपाली चेलिहरु विभिन्न दलाल तथा ठगहरुको बेचिँदै आएका छन् । दलालहरुले सिधा सोझी नेपाली चेलिहरुलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर सजिलै आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल हुँदै आएका छन् । त्यसोत एउटा देश पठाउँछु भन्दै अर्कै देशमा बेच्दै आएको घटनाहरु दलालहरुको लागि सामान्य नै भईसकेको छ । यसैक्रममा शुकमाया लिम्बुलाई पनि दलालहरुले सिरीयामा पु¥याउन सफल भए । तर विभिन्न मान्छेहरुको सहयोगमा उनी नेपाल फर्कन सफल भएकी छन् । अमेरीकाबाट आङकामी शेर्पा, नेपाल बाट गायक, कलाकार नबिन खड्का र दावा छिरीङ तामाङफुर्सदमा
सिलवाल पक्राउ गर्न इन्टरपाेल डिफ्युजन नोटिस जारी
जनवरी २२, काठमाडौ ।नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व डीआइजी नवराज सिलवालको खोजी गर्न इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। आइजीपी बढुवा सम्वन्धि कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते अभियोगमा सिलवाललाई बयानका लागि बोलाउँदा उपस्थित नभएपछि र प्रहरीको पक्राउ प्रयास लगातार असफल भएपछि प्रहरीले डिफ्युजन नोटिश जारी गरेको नेपालखबरमा समाचार छ । नेपाल प्रहरीको सिफारिसमा इन्टरपोलले सिलवाललाई पक्राउ गर्न डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको हो। ललितपुर क्षेत्र १ बाट एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित सिलवालले आफू जनताका प्रतिनिधिबीच रहेको र प्रहरीकै वरिपरि रहेको बताएपछि प्रहरी परिसर ललितपुरबाट १ सय ६५ जनाको टोली उक्त क्षेत्रमा परिचालितफुर्सदमा
विदेशबाट टिभी ल्याउँदा के कति भन्सार तिर्नुपर्छ ?
जनवरी २२,।वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशमा हुनुहुन्छ र नेपाल फर्किन खोज्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि सामानहरू के के ल्याउने भन्ने सोचिरहनुभएको होला । सामान ल्याउने सोच्ने कुरा सँगै के के कुराहरूमा भन्सार लाग्छ वा लाग्दैन वा लाग्छ भने के कति लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नु जरुरी हुन्छ । यो लेखमा हामी तपाईँलाई सहयोग हुनेगरी ती विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौ । शुभयात्रामा धेरै साथीहरूले टिमी ल्याउन के कस्तो पैसा पर्छ भनेर बुझिराख्नुभएको हुन्छ । वहाँहरूलाई पनि यो लेख काम लाग्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । कसले ल्याएको सामानमा भन्सार लाग्दैन ? ६ महिनाभन्दाफुर्सदमा
जनवरी २२, – चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले दोक्लाम चीनकै हिस्सा भएको दोहोर्‍याउँदै उक्त क्षेत्रमा आफ्नो देशले सडक बनाउनु जायज भएको बताएको छ। बेइजिङमा एउटा पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता लू काङले त्यसबारे जानकारी गराएकी हुन्। केही सञ्चारमाध्यमहरूमा हालै प्रकाशित भूउपग्रह तस्वीर अनुसार चीनले विवादित भनिएको उक्त क्षेत्र नजिकै चीनले एउटा ठूलो सैन्य संरचनाको निर्माण गरिरहेको छ। चीनले सैन्य संरचनाको निर्माण गरिरहेको स्थान केही महिनाअघि भारतीय र चिनियाँ सेना आमुन्नेसामुन्ने भएको ठाउँदेखि नजिकै रहेको छ। चिन्ता हुन त औपचारिक रूपमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले विवादित क्षेत्रमा त्यस्तो केही नभएको जनाएको छ।फुर्सदमा
जनवरी २२, काठमाडौं। विश्वकै चर्चित हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलको दाम्पत्य जीवन टुटेको दुखद खबर छ। २०५३ सालमा झापाकी मिना ढकालसंग वैबाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका चर्चित कलाकार मनोज गजुरेलको जोडी २२ वर्षपछि टुटेको छ । २०७४ साल पुस ११ गते दुवै जनाको डिभोर्स भएको हो। डिभोर्स गरेपछि मनोज गजुरेल चीन भ्रमण निस्किएका थिए। स्नातक गरेका एक छोरा मिरोज गजुरेल चाहिं मनोजसंगै रहेका छन्। १३ वर्षे एकजना छोरी आठ कक्षामा पढ्दै छिन। छोरा बाबुसंग र छोरी आमा मिनासंग बसेकी छिन। काठमाडौंको पुतलीसडकबाट सुरु भएको प्रेम सम्बन्ध र वैबाहिक सम्बन्ध टुटेपछि कलिउड र हाँस्यफुर्सदमा
ताजा खबर, नेपाली खबर, फोटो ग्यालरी, भिडियोहरु, मनोरंजन No Comments »
जनवरी २१,काठमाडौं, माघ ८ – प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेश सांसदको शपथपछि दलहरुको ध्यान प्रदेशसभा सरकार गठन र राष्ट्रियसभा चुनावमा केन्द्रित भएको छ । राष्ट्रियसभा चुनाव माघ २४ गते हुँदैछ । संविधान अनुसार प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मतदान गर्न पाउनेछन् । हरेक प्रदेशबाट ८/८ जनाका दरले ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने ३ गरी राष्ट्रियसभामा ५९ जना सांसद रहने व्यवस्था छ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १ हजार ५ सय ६ जना साथैफुर्सदमा